श्रद्धा कपुर बन्ने भइन् नेपालीकी बुहारी, कहिले हुँदैछ विवाह ? – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र १४, २०७८ समय: ०:१७:४२
Mountain Media August 29, 2021
एजेन्सी । बलिउड नायीका श्रद्धा कपुर विवाहको तयारीमा रहेको भारतीय मिडियाले दावी गरेका छन् । इन्डिया डट कमसँगको अन्तर्वार्तामा श्रद्धाका नातेदार प्रियांक शर्मा र काकी पद्यमिनी कोल्हापुरेले यसवारे संकेत गरेको उल्लेख गरिएको छ । श्रद्धा र रोहनको विवाहबारे प्रश्न गर्दा प्रियांकले भनेकी थिइन्, ‘म यसबारे केही बोल्दिन। अहिले नै के भन्ने मैले ? यदि सबैको प्रश्न उनीहरुको विवाहबारे छ भने, पक्कै पनि त्यो राम्रो निर्णय हुन सक्छ।’
Last Updated on: August 30th, 2021 at 12:17 am